बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय माग गर्दै प्रदर्शन : सागरमाथाकी छोरी ! – Complete Nepali News Portal
बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय माग गर्दै प्रदर्शन : सागरमाथाकी छोरी !
काठमाडौँ : बलत्कारीलाई कानूनमा नै फाँसीको सजायको माग गर्दै आज प्रदर्शन गरिएको छ ।
नयाँबानेश्वरदेखि माइतीघरसम्म बलत्कारीलाई संविधानमा नै फाँसीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्दै महिला अधिकारकर्मीहरुले आज प्रदर्शन गरेको हो ।
¥यालीमा ‘आफ्नो छोरी चेलीको अस्मिताको पहरेदार आफै बनौँ बलात्कारीलाई फाँसी नै चाहिन्छ, ‘बलात्कारीलाई फाँसी दे’ जस्ता नारा लगाइएको थियो । उनीहरुले संविधान संशोधन गरी बलत्कारीलाई फाँसीको व्यवस्था कानूनीरुपमा नै हुनुपर्ने जोडदार माग गरेका छन् ।
उहाँले बलात्कार जघन्य अपराध भएकाले मिलापत्र गराएर अपराधी उम्काउन नपाइने बताउनुभयो । (न्युज२४) बाट